कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् असार १० गतेको राशिफल « Channel Np
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् असार १० गतेको राशिफल
प्रकाशित मिति : Monday, June 24th, 2019 at 11:51 PM
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल असार १० गते मंगलबार इश्वी सन् २०१९ जुन २५ तारीख आषाढ कृष्णपक्ष अष्टमी तिथी उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र सौभाग्य योग बालव करण चन्द्रमा मिन राशिमा आनन्दादि योगमा सिद्धि योग सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु भौमाष्टमी व्रत गोरखकाली पूजा देवपाटनमा त्रिशूलयात्रा भूमि पूजा – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे / च्यानल एनपी
अनावश्यक खर्चको सम्भावना रहेकोछ । मनमा अशान्तिले वास गर्नेछ । अनावश्यक झमेलामा फसिएला । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सावधानि अपनाउनु पर्नेछ । परीवारका सदस्य हरु सगँबाट टाढाँ भएको अनुभव हुनेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला ।
आय आर्जनका श्रोतहरु मनग्य फेला पर्नेछन । बिशिष्ट ब्यक्तिहरुको साथ सहयोग द्वारा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहने योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्नहुन सक्नेछ । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
पारीवारिक साथ सहयोगमा नयाँकार्य थालनिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । सवारी साधनको प्रयोगमा बिशेष सावधानी अपनाउनु उत्तम रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सावधानि अपनाउनु पर्नेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
साथि भाई हरुको खराब संगतका कारण सामान्य अपजस आई पर्नेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ ।
सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यत्तिहरु बाट धोका हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष सजग रहनु होला ।
कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । जिवनसाथीको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसाय तथा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । नयाँ कार्य थालनिको योग रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग समेत रहनेछ ।
तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आट र साहशको कमि आउनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला ।
पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ प्राप्त हुनेछ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ ।
पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ । परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । आट र साहशको कमि आउनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला ।
नयाँ लगानिको क्षेत्रमा समय राम्रो छैन सजग रहनु होला । बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । अनावश्यक झमेलामा फसिएला । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सावधानि अपनाउनु पर्नेछ ।
निर्णय गर्ने क्षमता मा कमि आउनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । शारिरीक आलस्यताका कारण कार्य सम्पादनमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।